Izinkinga zelasekhaya nomnotho wendawo – Msunduzi News
AKUYONA imfi hlo ukuthi iqembu lasekhaya alenzi kahle. Leli qembu emidlalweni engama-22 yanqoba emithathu kuphela yehlulwa kwelishumi nanye yadlala ngokulingana kweyisishiyagalombili okwenza ibe namaphuzu ali-17. Lesi sithombe sibeka leli qembu engcupheni yokuyogijima ehlathini.
Uma lokhu kungenzeka kungaba yinhlekelele engeke ithinte kuphela abaphathi kanye nabadlali baleli qembu kepha kuyoba nomthelela ongemuhle nasemnothweni wendawo. Lokhu kufakazelwe yisikhulu sikaMasipala kanye namalungu omphakathi akhulume naleli phephandaba.
Ephawula uNkk uNelisiwe Ngcobo nobambe njengeMeneja kaMasipala uthe njengomunye wabaxhasi bakhathazekile ngokwenzakalayo nathe ukholwa ukuthi yinto edlulayo. Udalule ukuthi njengoMasipala kusuka ngonyaka wezi- 2017 baba nenkontileka naleli qembu lebhola nosekusele unyaka owodwa ukuthi iphele.
“SiwuMsunduzi siyixhasa (iMarizburg United) ngemali, inkundla yokudlala iHarry Gwala, indawo yokuzilolonga, eseduzane kwenkundla iHarry Gwala, siphinda silekelele ngokuqapha isiminyaminya kanye nomlilo uma kunomdlalo.”
Kuhlale kunesikhalo kwamanye amadolobha ekutheni izinkundla zikanokusho zimila ukhula njengoba kungekho midlalo nje. Inkundla iHarry Gwala izuza kakhulu njengoba uma kunemindlalo yePremier Soccer League (PSL) ingcwala phama. Ngokohlelo lwePSL iqembu linemidlalo eli-15 ekhaya, kuthi eminye elinganayo ibe sekuhambeni.
Ephawula ngokungenzi kahle kweqembu okungathikemeza umnotho wendawo uma kungenzeka iqembu liye kuNational First Division eyaziwa ngokuthi isehlathini uthe: “Uma ingagcina iphumile iMaritzburg njengoba isasemsileni kungaba nzima nakuthina ngoba iyona esilekelelayo ekumaketheni idolobha, ingakho singayiyekeleli njengoba izinto zingahambi kahle, sizama ukuthola izisombululo nokuthi kungayeka kanjani phambili. Okunzima njengamanje ukuthi ngeke kufane njengesizini yangowezi-2017 lapho esaxhasa khona ngamabhasi ukuthi bayokwesekwa ukuze bagweme izembe. Njengamanje sizama ngakho konke okusemandleni ukonga izimali singuMasipala ngoba asimile kahle,” kusho uNkk uNgcobo. Uphethe ngokuthi “Kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi uMsunduzi uyiNhlokodolobha yesifundazwe saKwaZulu Natal ngakhoke uma kunomdlalo nomnotho wendawo uyasimama, ngoba amahhotela kanye nezinye izindawo zokulala ziyakwazi ukuthola inzuzo”.
Imilomo iyavunana nakubalandeli ngokumqoka bokuthi iMaritzburg United ingashoni ehlathini nokho bathe ezinye izinkinga iqembu lizigwaza ngowawo. Ongumlandeli weqembu uNks uNelisiwe Zondi uthe yena akakuboni okuhlukile okwenziwa abafana ngesizini edlule nabakwenza manje, futhi akathandi ukuphawula ngomqeqeshi omusha uMnu u-Erick Tinkler ngoba musha eqenjini, “Engikuqaphelile ukuthi iMaritzburg iyabadayisa abadlalai bese ingabe isathenga abasha abazovala isikhala salabo abahambile. Abafana bayadlala ikona ukuthi ibhola liyagingqika.”
Ephuwula ngokubona iqembu liya noma lingayi ehlathini uveze ukuthi yena njengomlandeli akakaboni ukuthi kungenzekani kodwa ubona kuncike kubona uqobo abadlali ekutheni bazibona beyaphi. Uqhube ngokuthi uma bengaya kuNFD usazoqhubeka abeseke ngoba maningi amaqembu angena aphuma kuNFD njengoBlack Leopards kanye neJomo Cosmos, “Singabalandeli siyadinga ukuthi abafana sibanikeze ivavavumu, ngoba esengikuqaphelile ukuthi uma kunabalandeli abaningi enkundleni akuvamile ekutheni bahlulwe kulowo mdlalo.”
UMnu uSbongiseni Mjwara uthi yena ngokokudlala abafana ubabona benza kahle ngoba njalo uma bedlala bahlezi benethemba lokuthi kungenzeka lowo mdlalo bawunqobe.
Previous post: Nawe Elandskop awumncinyane usuveze inkanyezi ngemfundo
Next post: Ukoma kwamadamu kukhonga kukhulu